Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekufutshane ne-Av. Ey - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekufutshane ne-Av. Ey
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguBenjamin
Zonke iindawo ziye zacingelwa ukuze uzive uthe zava. Yindawo entsha, enazo zonke izinto ezinokusetyenziswa. Ihonjiswe ngendlela yale mihla kodwa etofotofo, ine-50 "4k Smart TV ekwaziyo ukufikelela kuNetflix, i-HBO Max, INKWENKWEZI+, i-Youtube Premium kunye ne-Entel cable TV ukongezelela kwi-Hot-Fridge Air conditioning. Iflethi inegadi encinci elungiselelwe abantu abafuna ukubethwa ngumoya.
Zonke zenzelwe ukuba zibe nexesha elimnandi, elitofotofo nokuziva usekhaya.
Igumbi linesikrini esineflethi esiyi-50 "esine-cable TV, kunye neNetflix kunye neYoutube Premium, ungacela ukusetyenziswa kwe-PC kunye neprinta (kuluncedo kakhulu ukujonga i-imeyile okanye ukuprinta iipasipoti zebhodi).
Le flethi inendlela entle yokufikelela kwinkqubo yezithuthi zikawonke-wonke kuquka ukuqeshisa ngebhayisekile ngamaxabiso afikelelekayo. Sisekude ngeekhilomitha eziyi-1 ukusuka kwinethiwekhi yokuhamba ngebhayisekile esixekweni.
Iflethi yethu ikwenye yeendlela eziphambili zesixeko.
- imizuzu eyi-3 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwi-micromarket, iivenkile ezifumaneka lula, amayeza kunye ne-ATM.
- imizuzu eyi-5 ngeteksi okanye izithuthi zikawonke-wonke zendawo ephambili yeebhari, iivenkile zokutyela kunye nee-cinemas zesixeko (iindledlana).
- imizuzu eyi-5 ngeteksi okanye izithuthi zikawonke-wonke ukusuka kwiziko lezembali.
- 50 m ukusuka kwizithuthi zikawonke-wonke ukuya kuzo zonke iindawo zesixeko.
- Iibloko eziyi-6 ukusuka kwivenkile enkulu ye-Hipermaxi (imizuzu eyi-10. xa uhamba ngeenyawo)